Ninka ugu Farxada badan Dalxiiska wuxuu ka yimaadaa Farxad Dunida
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Ninka ugu Farxada badan Dalxiiska wuxuu ka yimaadaa Farxad Dunida
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Jabinta Hawaii • Wareysiyo • LGBTQ • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Paul Rogers oo ka socda Planet Happiness wuxuu fahamsan yahay baahiyaha meelaha la aadayo xagga dib u dhiska si ka wanaagsan; wadaagno macluumaadka ku saabsan wax soo saarkayaga; la dhiso is-dhexgal lala yeesho meelaha la tagayo iyo la-hawlgalayaasha kale si loo taageero adkaysiga iyo soo kabashada Covid-19.
Paul wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ah lataliye sare oo dhanka dalxiiska ah oo ka tirsan ururada dalxiiska iyo wadaniga ah wuxuuna ka soo shaqeeyay in ka badan toban dal oo ku yaal Koofurta iyo Koonfurta-Bari Aasiya, Afrika, iyo Australia. Diiraddiisu waxay ahayd siyaasadda iyo qorshaynta fagaaraha - u adeegsiga dalxiiska gaadiid ahaan horumar.
U soo dir fariin cod ah: https://anchor.fm/etn/message
Taageer Podcast-kan: https://anchor.fm/etn/support